वद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक वातावरण तयार गर्नु नै हाम्रो पृथक पहिचान हो | RevoScience Nepali
Home /वद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक वातावरण तयार गर्नु नै हाम्रो पृथक पहिचान हो
कलेजमा विज्ञानJanuary 3, 2015
वद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक वातावरण तयार गर्नु नै हाम्रो पृथक पहिचान हो
प्रिन्सिपल, सेन्ट लरेन्स कलेज
चाविल, काठमाडौं ।
विसं २०३४ सालमा काभ्रे जिल्ला गैरेबेशी गाबिस ९ मा बाबु दशरथ डोटेल र माता हेमादेवि डोटेलको कान्छो पुत्रको रुपमा जन्मेका कृष्णप्रसाद डोटेलले शंकरदेव क्याम्पसबाट बाणिज्य विषयमा स्नात्तकोत्तर २०६० सालमा गरेका हुन् ।
स्वदेशमा आफैले केहि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सुरुमा नयाँ बानेश्वरमा कन्सल्टेन्सी खोलेको र पछि विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गरेपश्चात् सेन्ट लरेन्स कलेजमा आवद्ध भएको बताउँछन् । बिसं २०६४ सालमा को–अडिनेटर भएर तीन महिना काम गरिसकेपछि कलेजको प्रिन्सिपल भएको बताउँछन् । काभ्रेका सम्पन्न कृषि परिवारमा जन्मेका उनै डोटेलसँग रिभोसाइन्सका लागि गरिएको कुराकानीको संम्पादित अंशः
सेन्ट लरेन्स कुन उद्देश्यले स्थापना भएको कलेज हो ?
बाास्तवमा सेन्ट लरेन्स हामीले स्थापना गरेको कलेज होइन । यो १७ वर्ष पहिले (बिसं २०५४) सालमा स्थापना भएको कलेज हो । जतिवेला काठमाडौंमा प्लस टु कलेज स्थापना गर्न बढेको क्रेज र विकृतिहरु देखिन्थ्यो त्यतिवेला शिक्षालाई अलि फरक ढंगबाट लैजानु पर्छ भन्ने हेतुले सेन्ट लरेन्स कलेजमा आवद्ध भएका थियौं । हामीले उच्च शिक्षा परिषद्कौ नीति नियममा रहेर सञ्चालन गरेता पनि कलेज भित्र एक विसुद्ध शैक्षिक वातावरण सृर्जना गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रीत छौं ।
यस कलेजको सञ्चालन हामीले गरेपनि नाम परिवर्तन गर्ने हाम्रो उद्देश्य थिएन । पहिलेको संस्था जे जस्तो भएपनि सेन्ट लरेन्सको नाम परिवर्तन नगरि राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने भन्ने नै थियो । त्यहि भएर आजसम्म सेन्ट लरेन्स नै छ ।
यसकलेजमा कस्ताखाले विद्यार्थीहरुको चाप बढी छ ?
सुरु–सुरुको अवस्थामा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्ने कलेजको रुपमा चिनिथ्यो भने अहिले विज्ञान विषय पढ्ने कलेजको रुपमा चिनिन्छ । हामीसँग व्यवस्थापन र विज्ञानका विद्यार्थीहरुको संख्या बराबर छ । विज्ञान संकायमा ६० जना सिट संख्याबाट सुरु गरेका थियौैं, अहिले ३००को हाराहारीमा विद्यार्थी पुगीसकेका छन् ।
सेन्ट लयरेन्स अन्य कलेजहरु भन्दा के कुरामा पृथक छ जसले कारण विद्यार्थी समेट्न सफल हुनुभयो ?
भौतिक पूर्वाधारको हिसावले कुनै नयाँ कुरा दिन सकेका छैनौं । पाठ्यक्रमको हिसावले पनि अन्यभन्दा फरक रहेनौं तर साइन्सका विद्यार्थीहरुलाई प्रि–एमविविएस र प्र–इन्जिनियरिङका कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । यो अन्य कलेजहरुले पनि गर्दै आएको छ अहिले । यसभन्दा पनि हामीले विद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक वातावरण तयार गर्नु नै हाम्रो पृथक पहिचान हो । हामीकहाँ स्थानिय स्रोत, साधन र सहयोग अधिक भएकाले प्रगति सम्भव भएको हो ।
तपाईहरुको कलेजमा ल्याव, लाइव्रेरीको अवस्था कस्तो छ ?
साइन्स अध्यापन गराउनको लागि एक महत्वपूर्ण विषय नै भौतिक पूर्वाधार र ल्याव हो । ल्याव, लाइव्रेरीको कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकले कम्प्लेन गर्ने स्थिति छैन । यथेस्ट सुविधा हामीकहाँ छ ।
तपाईको कलेजमा कस्ताखाले शिक्षकहरुको वर्चस्व छ अर्थात उनीहरुको पढाउने शैली कस्ता हुन्छन् ?
पहिलो कुरा कलेज सञ्चालकहरु नै शिक्षित युवा जमात छन् । विशिष्ट किसिमको शिक्षा हासिल गरेको डाक्टर, प्रोफेसर राखेर मात्र उत्कृष्ट शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो होइन । यसकारण हामीले उत्कृष्ट मध्यको ‘उत्कृष्ट फेस’ नयाँ र अनुभवी शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइरहेका छौं ।
विद्यार्थीहरुको नतिजा कतिको सन्तोषजनक छ ?
विद्यार्थीहरुको नजिता सन्तोषजनक छ । यो साल हामी वोर्डमा उक्लन सकेनौं । नत्र प्रत्येक वर्ष उच्च माविमा हाम्रो नतिजा उत्कृष्ट थियो ।
कति प्रतिशत विद्यार्थीहरु सफल हुन्छन् ?
यो साल सत प्रतिशत हासिल गर्न सकेनौं । तै पनि ९६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरुको नतिजा सफल छ ।
सेन्ट लरेन्स कतिको महङ्गो कलेज हो, सामान्य तथा अति विपन्न परिवारको विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् ?
हेर्नुुुस् ! प्रोस्पेटकमा भएको फि लिने कलेज काठमाडौंमा १÷२ मात्र होलान् । यसरी कलेज सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । तर मध्यम खालको विद्यार्थीहरुले सेन्ट लरेन्स अध्ययन गर्न सक्छन् । विपन्नको लागि छात्रवृद्धि कोटा छुट्याइएको छ ।
उच्च शिक्षा परिषद्ले तोकेको छात्रवृत्ति योजना सही कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ ?
हामीले उच्च शिक्षा परिषद्ले तोकेको कोटा अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । परिषद्ले यसपटक देखि छात्रवृत्ति योजना कडाइ गरेकोे छ । नत्र, कलेजहरुले विभिन्न बाहानामा छात्रवृत्ति कोटामा परेको विद्यार्थीहरुसँग पनि शुल्क लिने गरेको पाइन्थ्यो । यो काम उच्च शिक्षा परिषद्ले पूर्णरुपमा बन्द गर्न सफल भएको छ । यसले विद्यार्थीहरुका लागि लाभदायक हुनेछ ।
सेन्ट लरेन्स कलेजले राजनितीक दबाब कतिको खेप्नु परेको छ ?
कलेजमा दुई किसिमको दवाव सृर्जना गर्नु परिरहेको हुन्छ । पहिलो विभिन्न राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरुले चन्दा माग्ने र दोस्रो कलेजमा युनियन खोल्ने थ्रेट दिने, अवस्था चै छ । यो समस्या हाम्रो कलेजमा मात्र नभएर अन्य कलेजमा पनि हुने गरेको छ । यो हुनु ठिक होइन ।
तपाईहरुले नेपालमा उत्पादन गरेको विद्यार्थीहरु धमाधम विदेशीन बाध्य छन्, तपाईहरुले व्यवहारीक शिक्षा दिन सक्ने वातावरण किन नबनेको होला ?
मुख्य कुरा समाजमा बस्ने व्यत्तित्वको इच्छा कतातिर छ भन्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा नेपालमा अनुसन्धानत्मक तथा व्यवहारीक शिक्षा निति पनि छैन र अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालयको खाँचो छ । बिजनेसमा अनुसन्धान गरेपछि स्थापना गर्ने र विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकासको लागि अनुसन्धान गर्ने परिपाटी सरकारले नबनाएको कारण देशले यस किसिमको समस्या भोग्नु परेको छ । त्यस्तै, सरकारले नेपालमा रोजगारको सृर्जना गर्न नसक्नु तथा नेपालको बैंकिङ्ग नीति एक दमै फितलो भएकोले पनि अधिकांश विदेशीएका छन् ।
विदेशी विश्वविद्यालयको स्विकृतिमा स्थापना भएको कलेजले सेन्टर लरेन्स जस्तो कलेजलाई कतिको असर पार्छ ?
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा नेपालमा कलेज स्थापना गर्दा राम्रै हुने देख्दछु । किन भने यसले गर्दा केहि प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीहरु यहि रोक्न सकिन्छ । अर्को कुरा भनेको विदेशीसँग सम्वन्धन लिए पनि नेपालको ऐन नियमको अधिनमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले खासै असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसले राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो नै हुन्छ । यदि सेन्ट लरेन्सको ‘पोइन्ट अफ भ्यू’ले हेर्ने हो भने, उनीहरुले अनुसरण गरेको शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम तथा प्रविधि हामीले पनि व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जसले हाम्रो शिक्षण प्रद्धति नै परीमार्जन गर्न सहयोग मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धा बढेतापनि नकरात्मक असर चै पर्दैन ।
एउटा विद्यार्थीले सेन्ट लरेन्स कलेज नै किन अध्ययन गर्ने ?
अनुशासित वातावरण र बाह्य कुनै दबाव विना अध्ययन गर्नकोलागि यहाँ अध्ययन गर्ने हो । अभिभावकले आफ्ना छोरा÷छोरीलाई उत्कृष्ट नतिजा ल्याइ उनीहरुको भावी शैक्षिक विकास खोज्नु भएको छ भने पनि यहाँ पढ्दा हुन्छ । यहाँ शिक्षक र विद्यार्थीको सम्वन्ध सुमधुर छ । यस कलेजमा विद्यार्थीले प्रिन्सिपललाई भेट्न कुनै समस्या छैन । पहिला हामीले विद्यार्थीको बारेमा सोच्छौ, दोस्रो अभिभावकत्वको भूमिका निवार्ह ग¥छौं र तेस्रोमा मात्र हामी कलेज सञ्चालकको हिसावमा सोच्छौं । यी तीन कुराले विद्यार्थीलाई सेन्ट लरेन्सले आर्कषण गरेको छ ।